शनिवार, बैशाख ४, २०७८
सोती घटनामा उब्जिएका ९ प्रश्न सोमवार, जेठ १९, २०७७
विभेदको विरुद्धमा मेरो कलम शनिवार, जेठ १७, २०७७
न्याय मर्न नदिऔं मंगलवार, जेठ १३, २०७७
कर्णालीमा कोरोना छ, परीक्षण पुगेको छैन ! फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारले नेपाल लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । त्यसयता लगातार संक्रमण देखिरहेका छन । पछिल्लो समय दैनिक संक्रमितको संख्या आइरहेको छ । जुन विदेशबाट भन्दा छिमेकी देश भारतबाट भित्रिनेहरुमा संक्रमण बढी देखिएको छ । अरु जिल्लामा दैनिक संक्रमित बढिरहेका बेला भारतसँग पाइला पाइलामा सम्बन्ध गासिएको कर्णालीमा कोरोना संक्रमित छैनन् भन्नु अब हास्यास्पद हुन्छ । सोमवार, जेठ ५, २०७७
कोरोना महामारीमा खानपानका १६ विधि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खानपानमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन । यसका लागि भिटामिन सि, भिटामिन डी , भिटामिन बी १२, भिटामिन इ, भिटामिन बी ६ तथा जिंकको इम्युनिटी पावर बढाउन ठूलो भूमिका हुन्छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने अरु १६ उपाय यसप्रकार छनः मंगलवार, बैशाख ३०, २०७७
पहिले जनताको ज्यान जोगाऔ बजेट विकासको निरन्तरता भएपनि यसपटक हामीले साच्चिकै केही पक्षलाई सुक्ष्मरुपमा ध्यान दिन जरुरी छ । कोरोनाले मानिसलाई जति ठूलो असर पुर्याएको छ । त्यो भन्दा ठूलो असर किसानलाई गरेको छ । कोरोनाकै कहरमा नेपाली किसानले बजार नपाउँदा बाहिरबाट मात्रै दुई महिनामा अर्बौको तरकारी आयात भयो । खाद्यान्न पनि त्यत्तिकै आयात भइरहेको छ । सोमवार, बैशाख २९, २०७७
ओलीले नछाड्ने, प्रचण्डले पछार्ने ! ओलीले चुनौति नै पेश गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डकासहितका नेताहरुले ओलीलाई बालुवाटारबाट हटाउने औपचारिक कसरत शुरु गरेका छन । यसका लागि शुरुमा स्थायी समिति बैठक बोलाउन लगाउने, त्यहाँ ओलीको सबै घमण्ड झार्ने र पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिने, त्यसपछि केन्द्रिय समितिबाट पनि त्यही नियती दोहोर्याउने प्रचण्डको योजना छ । आइतवार, बैशाख १४, २०७७
प्रधानमन्त्रीले जम्बो सचिवालय खारेज गर्नुपर्छ ! कोरोना राहत कोषमा सांसदको तलव हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरीसक्यौ । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई चार महिनाको तलब नलिएर राज्यलाई राहत हुदैन । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा मन्त्रीसरहको सुविधा खाने कति छन ? मंगलवार, बैशाख २, २०७७
सपूत अवश्य जन्मिन्छ सिमानामा आएका नागरिक घर जान पाऔ भनेर रोइरहेका छन । बस्ती बस्तिका दुःखी गरिबहरु एक गाँस खान पाऔँ भनेर रोइरहेका छन । सरकार छ, छैन देशमा भन्ने अनुभुती सत्तामा बसेर अकुत सम्पत्ति जोड्न तल्लिन सिमित वर्गलाई थाहा होला । तर मैले मेरो देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ भन्ने अनुभुती गरेको छैन । शनिवार, चैत्र २२, २०७६
कर्णाली महामारी अर्थात् साउन-भदौमा धेरै केटाकेटी कुपोषण, झाडावान्ता, ज्वरो, गाला सुन्निने रोग र संक्रमण झेल्थे। कुपोषणले समेत थलिएर मृत्यु हुन्थ्यो। त्यस्तै, हिउँदको जाडो र घाँसपात अभावले भैंसीको दूध घट्थ्यो, खान नपुगी पाडापाडी मर्थे। अर्थात् सन्तान चार वर्ष पुग्दा बल्ल ढुक्क हुन्थे। बुधवार, चैत्र १९, २०७६
अन्तरजातीय विवाह र मिडिया क्षत्रीको छोरा यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन, मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन- महाकवि लक्ष्मीप्रासद देवकोटाको यो पङक्तिले सबैको मन छुन्छ। कतिको गहभरि आँसु पनि बग्छ। तर, हाम्रो मन मात्र छोयो, व्यवहार परिवर्तन हुन सकेन। व्यवहारमा पनि लागू हुन सकेको भए हामीकहाँ जातीय विभेद अन्त्य भइसकेको हुने थियो। शनिवार, चैत्र ८, २०७६
म बनाइएकी लेखक आइतवार, फाल्गुन ११, २०७६
नफेरिएको त्यो गाउँ परिवर्तनको वैश्विक घोडा ठ्याक्क यो गाउँमा आएपछि रोकिएको छ, आरामार्थ निदाइरहेको छ सायद, सयौं वर्षदेखि। तब त यस गाउँमा उत्साहको हावा चल्दैन, कुनै चाडपर्वको रोमांचकता छैन। बिहिवार, फाल्गुन ८, २०७६
कर्णालीमा सफल बन्यो ओली र माधव नेपाललाई जुधाइरहने प्रचण्डको रणनीति शनिवार, बैशाख ४, २०७८
‘कर्णालीको राजनीतिले ओलीलाई सबक सिकायो’
प्रचण्ड र माधव नेपालद्धारा सर्वदलीय बैठक बहिष्कार
कर्णालीमा यसरी भित्रिदैछ कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट
ओलीलाई माधव नेपालको झापड, कर्णालीबाट कारबाहीको जवाफ
सुर्खेतबाट धरान हिडेको बस कोलहपुरमा दुर्घटना
आज थप ९०० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
दलवलमै जोगियो कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको पद
बद्लियो कर्णालीको राजनीति, शाही सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन
१ आफु पढेकै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त
२ मुख्यमन्त्रीमा कँडेल र ज्वालाको लडाई उत्कर्षमा
३ साथीको घरमा दमाईकी छोरी भनेर पिँडीमा सुताए
४ कर्णालीमा एमाले सत्तापक्ष, माओवादी प्रतिपक्ष !
५ दलवलमै जोगियो कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको पद
हुम्लामा बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालन बिहिवार, पुष १७, २०२६
कर्णालीमा आज दिउँसो प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्दै बिहिवार, पुष १७, २०२६
सल्यानमा लालीगुराँस नफुलेपछि संकटमा जुस उद्योग बिहिवार, पुष १७, २०२६
चौहान आइसल्याण्डको क्लबमा अनुबन्धित बिहिवार, पुष १७, २०२६
पारसले त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी सिरिज गुमाउने बिहिवार, पुष १७, २०२६
एन्जल्स हार्टको विजयी सुरु बिहिवार, पुष १७, २०२६
कुकुर मारिदा आँशु आउने शुष्माका मान्छे मर्दा आउँदैन् ?
नारी अस्तित्वमा समर्पित नमूनाको फेसन शो